Foto Hathaway na magazin Maxim
N'afọ 2011, magazin kachasị aha ya bụ Maxim na-akpọ aha nke ọtụtụ narị ụmụ agbọghọ ndị kasị nwee mmekọahụ na ụwa, ebe kpakpando Interstellar Anne Hathaway weere ebe a na-asọpụrụ ya. Nke a bụ otú magazin dị oke kwuru banyere nhọrọ ya: "Ka anyị nwee olileanya na njedebe nke ụwa abịaghị na 2012." Ọ ga-amasị m ịhụ Anne dị ka "nwanyị cat" na fim ọhụrụ Christopher Nolan "Mbilite n'Ọnwụ nke Ọchịchịrị Ọchịchị."
Nkọwapụta Anne Hathaway na magazin kachasị elu
N'afọ 1996, afọ iri na anọ bụ Ann na-ekere òkè na "Gigi" - banyere otu nwa agbọghọ nke mechara ghọọ okenye. Otú ọ dị, Anne bụ nanị akụkụ nke òtù egwú, na n'oge "shootings" nke isi ihe mepụtara maka magazin bụ Maxim, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhụ anya n'ihi ebe ndị ahụ dị mma. Ma, ma eleghị anya, nke a bụ ihe ịrịba ama ụfọdụ na otu ụbọchị, onye na-eme ihe nkiri ga-aghọ kpakpando nkiri ma merie ihe karịrị otu onye na-ese foto n'ụwa.
Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, Anne Hathaway ka na-abata na Maxim, ma, n'ezie, maka ịse foto maka magazin ọzọ - Mario Testino nke na-enweghị atụ tụrụ ya maka French Vogue.
Atụghị egwu banyere ihe nkiri dị na sinima, onye na-eme ihe nkiri na-enweghị atụ, taa na-enwe mmasị dị ukwuu n'etiti magazin ndị a ma ama. Ntugharị foto (ma dị ọcha) na British GQ (2010), ebe, na mgbakwunye na foto, mkparịta ụka nyocha nke onye omeeji ahụ banyere isusu ọnụ na set. Ụlọ oriri abụọ a nụchara anụcha na Harper's Bazaar (2013 na 2014) na ajụjụ ọnụ banyere obi ike, mmekọahụ na ịjụ nri anaghị eri anụ maka Interstellar.
Kedu ka Ann Hathaway si ruo Max?
Anne Hathaway bụ nwanyị mara mma nke nwere obi ara nke ụda nke atọ. O nwere ihe igosi, o ma ya. Onye omee egwu anaghị atụ egwu ịmụrụ obere (ma n'ime ókè, n'ezie) na fim ahụ, jiri obi ike wepụ ya na ụlọ ahịa na-adọrọ adọrọ. Ma, n'ezie, o nweghi ike imeri n'ime umunwanyi iri kachasi abuo n'uwa .
Zoe Saldana, Anne Hathaway, Uma Thurman, Julianne Moore na Hilary Duff kwadoro oge na ụlọ
Onye a na-egwu Tennis Maria Sharapova na-eme ka ihe nkiri ya malite
Nyocha "afọ ojuju": Donald Trump on divaded starry
Ọ naghị eme maka magazin Maxim, mana o jisiri ike banye na ya. Ma onye maara, ma eleghị anya, otu ụbọchị, onye omeeji na ụdị ngosi dị iche iche ma dị mma Anne Hathaway ga-alaghachi na studio Maxim iji mee ka oge ịse foto ọzọ dị mma maka ọṅụ nke ndị Fans.
Biography nke Anastasia Volochkova
Uche nke Alena Shishkova
Uwe Nina Dobrev
Ihe nzuzo nke Marilyn Monroe
Megan Fox n'ókè
Ịcha Katie Holmes
Miranda Kerr na-enweghị eme-elu
Keira Knightley na swimsuit
Nri maka nwoke
Tsimicifuga - Njirimara
Mkpa ndị mbụ
Kedu ihe ha na-enye onye na-eme baptizim maka nwa agbọghọ?
Playboy na-akpọ abụ ndị kasị bụrụ egwu nke 2016
Ọmarịcha Pamela Anderson ga-eme ka ndị na-eto eto mara mma!
Gini mere na enweghi m obi uto?
Onyinye nye nwata nwoke a ruo afo asaa
Ịtali na-egbu nri Italian
Mụ na Brad Pitt, ebubo niile nke mmejọ ụmụaka
Ihuenyo kpaliri maka ihe ngosi
Michelle Keegan weputara ọhụrụ nchịkọta uwe okpomọkụ nke LIPSY
Gini mere oke oke nrọ?
Angelina Jolie na Gris
Mmiri ara ehi sitere na turmeric dị mma na ihe ọjọọ
Esi ewepu kpo ma obu kọfị?
Kedu esi esi esi nri macaroons n'ụlọ?
16 n'ime ụlọ nsọ ndị kachasị emetụta n'ụwa, nke na-enweghị ike ịme ka ihe ijuanya